Nicolas Dupuis: mikasa hanangona Barea 20 any Frantsa | NewsMada
Nicolas Dupuis: mikasa hanangona Barea 20 any Frantsa
Miasa hatrany i Nicolas Dupuis, na ao anatin’ny fanatanterahana ny fihibohana amin’ny ady atao amin’ny valanaretina coronavirus aza. Nambarany, ny faran’ny herinandro teo fa manana fikasana hanangona Barea miisa 20 any Frantsa ny tenany miaraka amin’ireo teknisianina efa niara-niasa taminy hatramin’izay. «Tsy maintsy tsinjovina dieny izao, ireo hisolo toerana ireo mpilalao efa nahazoazo taona», hoy izy. Na izany aza, tsy mbola voafaritra na efa nisy anarana nambarany fa vao eo am-piresahana amin’ireo olona any Frantsa izy, amin’izao fotoana izao.
Efa nalaza tao anaty tambajotran-tserasera kosa nandritra ny andro vitsivitsy izay, ny amin’ireo mpilalao roa lahy izay voalaza fa manana ra malagasy dia i Kevin Theophile Catherine, izay milalao ao amin’ny Dynamo de Zagreb. 31 taona izy, ankehitriny ary vodilaharana no toerana misy azy. Araka ny fantatra efa manana traikefa amin’ny fiatrehana lalao lehibe maro izy, ka anisan’izany ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «ligue des champions». Eo ihany koa i Loic Lapoussin, 24 taona ary mitana ny toeran’ny irakiraka.
Ankoatra izay, efa mijery sy mandinika ny lalaon’ireo ekipa hifanandrina amin’ny Barea, eo amin’ny fifanintsanana ho an’ny “Can 2021?” sy ny “Mondial 2022”, i Nicolas Dupuis, amin’izao fotoana izao. Tsy nohadinoiny koa ny niresaka ilay Academie Elite des Barea, izay hanomanana ireo katitakely ho Barea rahatrizay. “Raha vao tapitra ity fihibohana ity ka resy tanteraka ny coronavirus, avy hatrany dia hitsirika ireo ankizy ho ao anatin’io Akademia io isika”, hoy izy.
Farany, nanome fankaherezana ho an’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny “Orange pro league” ny tenany amin’ny ezaka efa natao sy vita ary ny mbola hatao.